Echefula Olu Gị | Martech Zone
Sọnde, Febụwarị 10, 2013 Bọchị Sọnde, Machị 24, 2013 Douglas Karr
Enwetara m nzaghachi site na ụfọdụ ndị na-ede akwụkwọ na akwụkwọ ozi anyị na-adịbeghị anya akọrọ. Agaghị m arụrịta ụka na ya - anyị na-arụsi ọrụ ike na-eme ọtụtụ nyocha miri emi banyere ngwaọrụ na atụmatụ oge. O yiri ka ọ dị omimi anyị na-eme nyocha anyị, ọ na-esiri anyị ike ide akwụkwọ dị nkenke nke na-eme ikpe ziri ezi ma na-ekwusi ike na a nụrụ olu gị.
Enyi m a bu onye na achoputa ihe na blog, ma na edekwa ya, ya mere ana m ege nti ma aga m eme mgbanwe. Na post ọ bụla, M ga-agbakwunye ụcha na mkparịta ụka gị na gị. Martech Zone na-ele oke nchekwube anya etu teknụzụ nwere ike isi nyere ndị ahịa aka. Ihe isi ike bụ na anaghị m enwe nchekwube. Ọ dị m ka a ga - asị na ngalaba ngwaọrụ iji nyere anyị aka buru ibu ma dịkwa gịrịgịrị - na - enwekwu ohere maka sistemụ mgbasa ozi ntanetị ga - enyere anyị aka ịgbakọta, tụọ ma bulie nkwukọrịta anyị na atụmanya na ndị ahịa.
Anyị na-echekwa itinyekwu olu na Martech Zone. Echere m na enwere ohere ịgbakwunye nnukwu ahịa ma ọ bụ uche teknụzụ nwere ike ịdị nso na isi ụlọ ahịa ahịa nke New York, Boston, ma ọ bụ San Francisco. Ọ bụrụ n’ị bụ onye edemede teknụzụ… ọkachasị onye nwere njakịrị, ọ ga-amasi gị ịgwa gị okwu. Ọchịchọ anyị ruo ugbu a ebutebeghị ọtụtụ ndu.
Laghachi na egwu…
Agaghị ede ederede naanị iji dee ọdịnaya. May nwere ike chọpụta na ọdịnaya anyị na-asọ ma na-asọ. Offọdụ n'ime ya bụ n'ihi oke ọrụ anyị, mana ọtụtụ oge, ọ bụ naanị na anyị enweghị ihe ọ bụla dị mkpa ikwu. Anyị chọrọ ka blog ọ bụla nyere ndị na-ere ahịa aka. Ederede ọ bụla.
Nakwa, anyị ejirila Podcast, mmemme email na vidiyo gbasaa olu anyị. Anyị esonyela ndị otu Edge nke Web Radio iji mepụta ihe ngosi redio ọkachamara (agbasapụrụ na mpaghara) tinyere ụfọdụ vidiyo dị egwu. Jide n'aka na-akụ na - ị nwere ike ịnweta anyị site anyị iPhone ngwa, iTunes, Stitcher na Youtube.
Ekwetaghị m na onye dere okwu ahụ bụ "mgbasa ozi mmekọrịta", mana ha na-egbukepụ egbukepụ. Ọdịnaya bụ mgbasa ozi… mana ọdịnaya na-enweghị olu abụghị mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ọ bụ naanị etiti. Etufula olu gi. Debe ya na mmekọrịta.
Tags: Ahịa Podcastàgwàstyleolu